Arbacada, Janaayo 13, 2021 Arbacada, Janaayo 13, 2021 Douglas Karr
POE waa soo gaabinta saddexda hab ee wax loo qaybiyo. Lacag bixin, Lahaansho iyo Warbaahin kasbatay dhamaantood waa istiraatiijiyado wax ku ool ah oo lagu dhisi karo maamulkaaga kuna baahin karo gaadhistaada warbaahinta bulshada. Mushahar La Bixiyay, La Leyahay, Warbaahin Lacag La Siiyay - waa adeegsiga kanaallada xayeysiinta ah ee lacagta lagu bixiyo si loo wado taraafikada iyo farriinta guud ee sumcadda ee ku jirta waxyaabaha aad ka kooban tahay. Waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro wacyigelin, lagu boodo noocyo kale oo warbaahin ah iyo in waxyaabahaaga ay u arkaan dhagaystayaasha cusub.
Dummies: Tixraac intayada kale!
Wednesday, September 2, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkii la soo dhaafay waxaa jiray qado Indy Christian Geeks oo ku taal dukaan kafee aan ka jeclahay. Intii lagu guda jiray qadada, waxaan hadiyad qaas ah ka keenay dadka wanaagsan ee Wiley Publishing (sidoo kale halkan Indianapolis!). Ragga ayaa xoogaa madadaalo ah… sawiro qaar ka mid ah sawiradooda waxayna u soo galiyeen barta Twitter daqiiqado gudahood iyagoo wata cinwaano waaweyn sida, “Sirtii wey banaantahay! Dhinaca afduubka, Wiley wuxuu runtii saameyn la yaab leh ku yeeshay warshadaha daabacaadda oo leh sumadda Dummies. Waxaa qoray